Ebube Eji Ọrụ Batrị China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ebube Eji Ọrụ Batrị - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ebube Eji Ọrụ Batrị)
Ọpụpụ n'èzí Na-edebe Batrị Ndị Kwadoro
Ọpụpụ n'èzí Na-edebe Batrị Ndị Kwadoro Atụmatụ: 1. Nke a bụ otu ụzọ kachasị mma kpo ọkụ ọkụ, nzube ya bụ iji zere aka ka ọ bụrụ oyi ma ọ bụ frostbite na ugwu ugwu na oyi. 2. Na-agba ume, na-ebugharị ma ọ dịghị
Batrị nke a na-agbanye mgbanwụ bụ Mittens Snow
Batrị nke a na-agbanye mgbanwụ bụ Mittens Snow Atụmatụ: 1.Ọdịmma ihe onwunwe na ndụ ogologo oge 2.Nkeghari akuku nke oma, ikpo oku ngwa ngwa, ichekwa ike. 3.Nchịkwa Nchekwa Ụdị: Ịnọgide Na-ekpo ọkụ 2-3 Awa - Ọkara Ịkpọ Ọkụ 3-5 Awa 4.Wechiproof 3.7V / 4500 mAh Lithium batrị na-eme ka ọ dị njikere iji snow ma ọ bụ Rain,...
Batrị Batrị Battery Battery Battery Battery Battery Battery Battery USB
Batrị Batrị Battery Battery Battery Battery Battery Battery Battery USB Ọgụ aka anyị bụ ụzọ ọhụrụ ị ga-esi jide aka gị (na n'akụkụ ndị ọzọ nke ahụ gị). Anyị na-agbanye ọkụ ọkụ anyị nwere ike iweghachite site n'ịkụnye ha na ọdụ ụgbọ mmiri kọmputa. Ọgụ aka anyị dị mfe, dị mma ma dị mfe iji. Ị na-atụgharị ha, ị...
Batrị Lithium a na-agbanye mgbanaka
Batrị Lithium a na-agbanye mgbanaka Ọ bụrụ na ị nọrọ oge ọ bụla n'èzí n'oge oyi, ị nwere ike ịnụ banyere insoles kpụ ọkụ n'ọnụ. Enwere ọtụtụ ụdị dị iche iche dị ọkụ nke nwere ike ịbanye na akpụkpọ ụkwụ gị ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ na iji batrị na-ekpo ọkụ n'oge niile. Ọ bụrụ na ị na-etinye oge dị ogologo na...
Control Remote Control Lithium Batrị Na-ekpo ọkụ
Control Remote Control Lithium Batrị Na-ekpo ọkụ Ngwaahịa Atụmatụ: Ime igwe na-achịkwa, insoles na-ekpo ọkụ. Ntọala okpomọkụ atọ: ala, ọkara na elu. Enwere ike iweghachi ihe karịrị ugboro 500. Achịkwa site na ntanetị igwe ikuku ka eji ọkụ ọkụ. Nkà na ụzụ ọgbara ọhụrụ eletrik anaghị eji wires, eriri ma ọ bụ batrị ejiri...
Ụlọ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na batrị 2300MAH Batrị na-agbake
Ụlọ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na batrị 2300MAH Batrị na-agbake Ọ bụrụ na ị na - achọ nkasi obi oyi kachasị mma maka ụkwụ gị, elela anya karịa ọkụ eletrik anyị. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ihe dị ọkụ dị iche iche dị ọkụ n'ahịa iji nyere ndị mmadụ aka ịnọgide na-ekpo ọkụ ma na-ewute ha ọbụna n'oge oyi na-atụ oyi. Ọ bụrụ na...
Insoles kpụ ọkụ n'ọnụ na batrị fanyere
Ọkụ dị ọkụ dị ọkụ bụ naanị ihe dị gị mkpa iji mee ka oyi na-atụ n'oge oyi a-na-eme ka ụkwụ gị dị ọkụ n'ejighị ọkụ ma mee ka ọ bụrụ ajirija. Ọ bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka ụkwụ gị na-ekpo ọkụ mgbe ị na-anụ nnukwu ụlọ. Insoles kpụ ọkụ n'ọnụ na- enye ọbụna nkasi obi na ntụsara ahụ karịa nke Original Heated...
Ebube Eji Ọrụ Batrị Obere Okpomọkụ Batrị Ihe mgbochi ọkụ batrị Mittens dị ọkụ batrị Injin ọkụ ọkụ batrị Nkume Ngwá Ọrụ na Desktọpụ Egwuregwu Ọkụ eletrik Enwere ike ọkụ ọkụ